idivayisi ehamba phambili yokusakaza esikhundleni sekhebula
Idivaysi Enamandla Ikuvumela Ukubuka Ama-Movie Amasha Ne-TV ngaphandle Kokubhaliswa Kwanyanga?
Nge-Ultimate TV manje ethengiswa emhlabeni wonke, lesi yisixazululo esikhulu sokubuka ama-movie akho owathandayo kanye nemibukiso mahhala!
Sonke siyazi ukuthi ukukhwabanisa kwezikweletu zekhebula kanye nezinsizakalo zokubhaliselwa zingaba kanjani.
buka tv free
Ukhokha ikhebula, i-Netflix, ama-movie nemidlalo ngokufunwa ... iteza.
Futhi nakanjani kukhona konke lokhu kwehadiwe. Umamukeli wakho, i-AppleTV noma i-Firesticks, i-DVD Player kanye nama-Smart TV ahlala ebiza kakhulu.
Ngakho-ke akusizi isimangalo ukuthi abantu abaningi futhi bafuna ishibhile, izixazululo ezilula zokusika izikweletu zekhebula nokulahla yonke i-hardware.
Ngokujabulisayo, kunesixazululo sokubuka ngokusemthethweni lutho mahhala!
Inkampani eqala ukuqala yase-US ivele negajethi entsha entsha futhi engabizi eshintsha indlela abantu abadla ngayo imidiya.
Ibizwa nge- Ultimate TV . Ibhokisi le-Home-of-the-art Home Theater elingaxhumeka kalula kunoma iyiphi i-TV. Iza nayo yonke into esevele ifakiwe futhi ivuleka futhi isebenza ngaphakathi kwamaminithi. Akukho okudingekayo kwezobuchwepheshe.
Yisikhungo sokuzijabulisa esiku-in-one esikuvumela ukuba ususe wonke amanye ama-hardware akho kanye nama-remotes. Zonke izinhlelo zokusebenza esiziziyo sezivele zifakwe ngaphambilini njengokungenzeka wazi kusukela kumikhiqizo efana ne-AppleTV, i-Amazon Firestick njll Kodwa kukhona umehluko omkhulu - ikuvumela ukuthi ubuke noma yini mahhala. Ngekho okubhaliselwe futhi ngokomthetho ngokuphelele.
Kulula! Vele uxhume i-Ultimate TV nganoma iyiphi i-TV onayo. Zonke izintambo zifakiwe kuphakheji. Cindezela inkinobho yamandla bese wenza. Akunandaba, kuthatha imizuzwana engu-10 futhi ukwazi ukubuka noma yini oyifunayo.
I-TV yokugcina ihlehlisiwe ngokugcwele futhi uyihlele kabusha ngakho isebenza ngisho nakakhulu. Ubuchwepheshe bokugcina be-TV buhlola i-intanethi lapho izothola khona futhi zisakaze, cishe noma yikuphi ukuboniswa kwethelevishini, i-hollywood movie, noma umcimbi wezemidlalo obukhoma ofuna ukubuka ngaphandle kokuba ukhathazeke ngokukhokha imali yokuqasha noma ukubhaliswa kwanyanga zonke.
"Le divayisi ingilondoloze amathani emali!"
Ungakwazi ngisho nokubukela kuthelevishini bukhoma 24/7 kufaka phakathi cishe zonke iziteshi ozithola kusuka kwenkampani yakho yekhebula yendawo kanye namakhulu amaningi kusuka emhlabeni jikelele. Konke i-Ultra HD yeqiniso.
Okuzwakala ukuthi kuhle ukuba yiqiniso kuyiqiniso, akukho izintambo ezihlanganisiwe. Yiqiniso udinga ukuba ne-intanethi futhi yi-bucks ambalwa ngenyanga. Kodwa awunayo yini njalo? Futhi ngokuphathelene nokulayisha kanye nezikhathi ezibukhali. I-Ultimate TV ishintsha ngokuzenzakalelayo isivinini sakho se-inthanethi ngakho konke uhlobo lokuqukethwe lungabukwa ngokushesha. Uma i-Youtube isebenza i-Ultimate TV izosebenza futhi.
Nge-Ultimate TV uzothola ukuthula kwengqondo, wazi ukuthi ungabuka imibukiso oyikhonzile.
YEBO! Ngokuqinisekile. Kusemthethweni ngokuphelele ukusebenzisa njengoba ungagcini okuqukethwe okusakazwa nje. Yilokho into enhle ngakho.
Yiqiniso izinkampani zekhebula azijabuli ngalesi simo ngakho zizama ukumisa i-Ultimate TV ekuthengiseni umphakathi. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi ibuyele emuva ngokushesha, kodwa uma nje unayo uke uphelele futhi uzokwazi ukubukela konke mahhala kuze kube phakade - ngokusemthethweni ngokuphelele.
Ngakanani Ukuthi Ungangibiza?
Cishe ucabanga ukuthi le divayisi iyabiza kakhulu ... Amanga! I-TV yokugcina isebenza ukuthenga oku-1 thola oku-1 oku-FREE. Ukukhokha okukodwa - akukho ukubhalisa, akukho izindleko zenyanga. Kuhlole!
Ungayithenga ngqo kusuka kuwebhusayithi yenkampani ngokuchofoza lapha .
QAPHELA: Njengoba kudingekile kakhulu, abantu manje bathengisa amadivaysi amaningi ngesikhathi esisodwa njengoba befuna ukuwadayisela ngentengo ephakeme kamuva. Sicela uvumele amaviki angu-1-2 wokuthumela.
I-TV yokugcina ingasetshenziswa kunoma yiliphi izwe lomhlaba.
Qala ukubheka noma yini mahhala ...
Njengoba manje utshelwe ngalolu qalo obuhle, ake ngikubonise ukuthi kulula kanjani ukusetha. Konke okudingeka ukwenze ukulandela lezi zinyathelo ezintathu:
Isinyathelo 1: I- Order Ultimate TV namhlanje ukuze usebenzise ukuthengiswa okungu-40%.
Isinyathelo 2: Uma uthola, vula iphakheji bese uyixhuma kunoma iyiphi i-TV oyithandayo ngezintambo ezifakiwe bese ucindezela inkinobho yamandla. Ultimate TV ibuza mayelana nekhi yakho ye-wi-fi. Beka futhi ulungele ukuhamba.
Isinyathelo sesi-3: Buka noma yini mahhala ... I-TV ephezulu izokukhombisa ngokuzenzakalelayo imibukiso ye-blockbuster noma ethandwayo, futhi ungakwazi njalo ukucinga noma yini futhi uyibuke ngokushesha.
Nasi iphuzu: I- TV ephezulu iyisipho esihle ngoba izosindisa wonke umuntu, owamukelayo, ithoni lemali!
Njengoba abantu abaningi bethengisa amadivaysi amaningi ngesikhathi esisodwa ukuze bakwazi ukubuyela emuva! Ngakho-ke sicela uvumele amaviki angu-1-2 okuthunyelwa. "